Waxaad u baahan tahay inaad codsato shaqo online? Shaqooyin badan ayaa lagu xayeysiiyaa online oo u baahan in aad codsato isticmaalaya shaqo portal online, ama website ah shaqada. halkan waa 7 Talooyin inay gargaar aad u codsato shaqooyinka laga helo portal shaqo.
portal shaqo A waa website shaqada. Loo-shaqeeyayaasha dhejin kartaa shaqo iyo shaqo doonka ah ka raadin kartaa shaqooyinka. A portal waa a albaab, iyo irid online ah albaab laga galo u websites kale. portal shaqo A ma aha oo kaliya in ay shaqo u helaan. Iyada oo portal shaqo, Waxaad gudbin kartaa codsiyada shaqada websites badan loo shaqeeyaha.
LinkedIn, Indeed.com iyo Monster.com Waxay yihiin portals ugu caansan shaqada weyn ee EE. UU. Laakiin shaqo-bixiyayaal badani waxay sidoo kale leeyihiin portals shaqo iyaga u gaar ah. Halkan waxaa ku qoran talooyin qaar ka mid ah in ay gargaar aad u codsato shaqooyinka laga helo portals shaqo online.
1. Raadi shirkad gaar ah oo codsanaya shaqada ay website
Marka aad ogaato waxa shaqo aad rabto inaad codsato, tag Glassdoor.com. Waxaad ka akhrisan kartaa warbixin ka shaqaalaha ka shaqeeya shirkada in. Mararka qaarkood waxay wadaagaan macluumaadka ku saabsan waxa ka mid ah in aad codsiga.
Mar kasta oo aad aragto shirkad la doorarka aad jeceshahay, qoraalada ganacsi. Hayso liiska shirkadaha taas oo diiradda. Hayso hubinta goobaha ay search of shaqooyin laga yaabo in dan.
2. Order ee portal shaqo loo-shaqeeye laftiisa ah
Haddii shirkadda uu leeyahay ay shaqada portal u gaar ah, codsan toos ah halkii ay ka dhex website ah shaqada. Codsiga waxaa si toos ah bogga internetka ee ah loo-shaqeeyeyaasha shows shirkadda in aad waqti u qaatay inuu booqo website oo waxaa xiiseynaya shirkadda.
Shaqada portal online weydiin doonaa macluumaad gaar ah. Waxaa laga yaabaa inaad weydiiso su'aalo ku saabsan waayo-aragnimo, waa in aad si toos ah u qori ku saabsan nidaamka. Laakiin had iyo jeer, sidoo kale weydiin in aad geliyaan aad resume ama warqad cover.
Ma aha in aad soo diri version la mid ah aad resume iyo warqad dabool mar kasta oo. Read sharaxaad ka mid ah shaqada oo ay helaan xirfado muhiim u shaqayso waxa uu u muuqdaa. Haddii xirfad u muuqataa sida “codsaday” ama waxaa ku xusan marar badan, Waxaa muhiim ah. U hubso in aad ku sheeg aad resume iyo warqad dabool sida aad u isticmaashay in xirfad.
Sida caadiga ah, shaqeeyayaasha heli codsiyada badan oo ad kasta ee shaqada portal. Iyagu ma leeyihiin inay iyaga akhriyey oo dhan. “Dib u bilaabaan nidaamka raad” Waxay waxaa loo isticmaalaa in caawimaad loo shaqeeyayaasha si loo farsameeyo waraaqaha dhakhso. Waxaa la doonaya nidaam computer hadalkii oo kale ku shuqul iyo waraaqaha ku tilmaamay. Tani waxay ka dhigan tahay waxaa muhiim ah in la isticmaalo luqad isku mid ah in aad resume iyo warqad dabool sida ay tahay in sharaxaad ka mid ah shaqada. Baro inaad ku qor warqad oo wuuna akhriyey Talooyin CV weyn.
Waa muhiim in la hubiyo dhexfakadaan hor diraya codsigaaga. Khaladaadka diro farriin ah in aad la dayacay, oo qofna doonayo qofka si taxadar la'aan ah u shaqeeya. Waxaad weydiisan kartaa saaxiib ama xubin qoyska ah inay akhriyaan codsigaaga. Waxaad kaloo isticmaali kartaa Grammarly si uu u hubiyo qalad. Grammarly waa lacag la'aan, u falanqeeyaan dhamaan macluumaadka galay on baadhi shaqo portal ee dhexfakadaan iyo naxwaha.
Hal hab si looga fogaado khaladaadka waa in ay ka koobanahay jawaabtaada meel on your computer ama qalab mobile, aan si toos ah on portal ah. Sidaas, Waxaad si taxadar leh iyo edit ka akhrisan kartaa jawaabahooda. ka dibna, marka diyaar, nuqul ka iyo paste iyaga on portal ah.
5. ha joojin, Ka raadinaya
Qor jawaabaha la siiyaa codsi shaqo kasta oo aad soo gudbiso portal shaqo. shirkadaha kala duwan sameeyaan su'aalo kala duwan, waana mararka fududahay in la ilaawo wixii aad ku qoray. Waxaad u baahan tahay in la ogaado waxa soo diray in shaqada portal haddii yeero waraysi. ka dibna, Waxaad ku siin karaan faahfaahinta wareysi ah in ciyaarta iyo taageero waxa uu ku qoray.
Haddii aanu jirin hab si loo badbaadiyo jawaabahaaga si aad u arki karo, nuqul ka iyo paste jawaabahaaga meel on your computer ama qalab mobile ka hor riixaya “soo” ka “soo”.
6. La xiriir LinkedIn tababaraha shaqaaleynta
Ka dib markii diraya codsigaaga, sugaan hal ama laba toddobaad. Haddii aadan maqli, raadinayso magaca tababaraha shaqaaleynta on LinkedIn ama bogga internetka ee shirkadda. Dir fariin gaaban oo gaar ah. U sheeg in aad weli xiiseynaya shaqada iyo sababta aad uga ciyaar wanaagsan for a. mararka qaarkood, Tani waxay ka caawisaa in dib loo eego codsiga.
7. Noqo joogto ah oo hana qalbi jabin
Codsiyada soo diray by shaqo portal online noqon doonaa mid ka mid ah dad badan oo helay by shirkadda. Waxaa had iyo jeer waa wax badan oo dadka soo codsanaya shaqooyinka isla. Haddii aad si toos ah u codsan on portal shaqo ee shirkadda ama isticmaal mid ka mid ah goobaha internetka shaqo raadinta, waxaad heli doontaa email xaqiijinta a. wargelinaysaa email The in codsiga la helay. Tani macnaheedu ma aha qof ayaa horay dib loo eego codsigaaga. jawaab toos ah loo diraa mar kasta oo qof khuseysaa shaqo.
Sida caadiga ah, ma waxaad maqli doontaa ka dib markii email in marka hore. Sida caadiga ah, shaqo oo kaliya ka jawaabin codsiyada ka portal shaqo ee dadka la soo xulay waraysi. In wadnaha khasaara. Tani macnaheedu ma aha in aadan ahayn musharax wanaagsan. Waxa kaliya ka dhigan tahay in aadan weli codsan shaqo sax ah. Codsiga shaqo todobaad kasta, xataa haddii aad leedahay wareysi socda.
Su'aalaha ku saabsan wareysiyada shaqo
Sida loo qoro email ah mushaharka gorgortanka